သစ်သားအင်္ကျီ ဦး ထုပ်ရပ်ခြင်း၊ ခေါက်နိုင်သောသစ်သားအ ၀ တ်များပြသခြင်း၊ ဧည့်ခန်းသစ်ပင်သစ်ပင်ဘက်စုံသုံးအင်္ကျီ
တိကျသောအသုံးပြုမှု: သစ်သားထင်း၊ သစ်သားကြိုးကွင်း
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: ၉၇*၅၁*၁၄၈ စင်တီမီတာ
1. ကြီးလေးသောဆောက်လုပ်ရေး: အရည်အသွေးမြင့် lacquered အစိုင်အခဲသစ်သားဝက်အူများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ ခြေထောက် ၄ ချောင်း၊ တည်ငြိမ်မှု၊ လေးလံသောအဝတ်အစားများနှင့်အပြင်အဆင်မျိုးစုံအတွက်အထောက်အပံ့
၂. စုဝေးရန်လွယ်ကူခြင်း - မည်သည့်ကိရိယာမှမလိုအပ်ပါ - အင်္ကျီကိုအတိုတစ်စကိုအနည်းငယ်အမြန်ခြေလှမ်းများဖြင့်စုစည်းပါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းညွှန်ပေးသည်။
၃။ ပုံစံနှင့်ပုံစံကြည့်ရန်၊ ဂန္ထဝင်နှင့်ဂန္ထဝင်သစ်ပင်ဒီဇိုင်းတို့နှင့်အတူအင်္ကျီထိန်သိမ်းသူသည်အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ ဝင်ပေါက်၊ စင်္ကြံ၊ အိပ်ခန်း၊ တိုက်ခန်း၊ တိုက်ခန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်အခြားအရာများနှင့်ကောင်းစွာလိုက်ဖက်သည်။
၄. မျိုးစုံနှင့်မျိုးစုံ - အဝတ်အစားများ၊ အဝတ်အစားများ၊ အဝတ်များ
၅။ SOLID ဆောက်လုပ်ရေး ၎င်းတွင်ထူးခြားသောအနံ့မရှိ၊ ရေစိုခံခြင်း၊ corrosion ဆန့်ကျင်ပြီးအဆိပ်အတောက်မပါ ၀ င်ပါ။ ကလေးများမှလည်းစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါးကိုသင့်အားပေးနိုင်သည်။ ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးလက်တွေ့ကျသောနှုန်းထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်အချို့အားစိတ်ကူးယဉ် OEM ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပထမ၊ ထိပ်တန်းအရည်အသွေးပထမ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု၊ အပြန်အလှန်အားသာချက်နှင့် win-win မူများကိုလိုက်နာသည်။ ၀ ယ်သူနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောအခါစျေး ၀ ယ်သူများသည်အမြင့်ဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ကိုပို့ဆောင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအားအသေးစားလုပ်ငန်းများသို့သွားရန်နှင့်ညှိနှိုင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအားအလားအလာသစ်နှင့်အဟောင်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကြိုဆိုသည်။
နောက်တစ်ခု: Solid Wood Modern Home Ktichen အခန်းစားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံ
သစ်သားအင်္ကျီ Rack Wall
သစ်သား ဦး ထုပ်